Miaro hevitra: toro-hevitra amin'ny fanomezana tetikasa amin'ny mpanjifanao | Famoronana an-tserasera
Tsy misy dikany ny hevitra iray raha tsy manao na inona na inona amin'izany isika. Mety ho hevitra tena azo ampiharina, miovaova ary manavao izy io, fa raha tsy afaka miasa aminy isika ary mampihatra azy amin'ny alàlan'ny paikady voafaritra dia hahena ho lasa eritreritra izany hevitra izany. Matetika izahay dia mijanona mieritreritra fa indraindray dia nahita hevitra izay tsy azontsika iaraha-miasa satria tamin'io fotoana io dia tsy afaka nanome sanda ho an'izany izahay ary izany dia mifandray akaiky amin'ny fomba fampisehoanay ny tetikasanay amin'ny hafa olona. Amin'ny asa famoronana dia tsy azo atao intsony ny tetikasa rehefa rahoviana tsy afaka mandresy lahatra ny olon-kafa ny fahamendrehany na ny fahamendrehany izahay na raha mametraka ny tenantsika amin'ny fomba fijerin'ny mpandray isika, satria tsy fantatr'izy ireo ny fomba hampifantohana tsara azy. Raha fintinina dia miresaka momba ny fivarotana ny foto-kevitray amin'ireo mpiara-miasa amin'ny tetik'asa ho avy izahay, raha tratrantsika izany amin'ny farany, dia hanomboka hanana lanja fanampiny io hevitra io. Amin'ny faran'ny andro dia momba ny fiarovana hevitra mandra-pahatongany mendrika izany.
Fa inona no mivarotra? Raha mitodika any amin'ny rakibolana isika dia hahita famaritana mitovy. Nilazana isika fa ny fivarotana dia ny fandresen-dahatra na hitaona olona hividy ary eto no misy ny hevi-dehibe: fandresen-dahatra. Zavakanto izay mety tsy dia sarobidy loatra na dinihina, ary amin'ny lafiny iray dia sarotra sy tsy fantatra. Ny fandresen-dahatra dia mifandray amin'ny fitaovana lojika sy ny rafitra ara-pientanam-po. Amin'ny lafiny sasany dia zavakanto izay mitaky ny faran'ny fahaizantsika maneho hevitra sy mamoha ny fangorahan'ny mpiara-miasa amintsika. Raha ny marina dia mila mametraka ezaka bebe kokoa ianao amin'ny fampisehoana hevitra na hevitra iray noho ny inoanao. Ny tanjona faratampony dia ny tsy hahatratra fivarotana ara-batana na isam-batan'olona ny endrika, vokatra na entana iray. Ny momba ny famoronana fampisehoana na kabary izay mampifandray ny mpijery ary mamorona fifamatorana matanjaka amin'ny marika sy ny asanay. Ny fizotran'ny famelabelarana (na ho an'ny hevitra na ho an'ny tetikasa na vokatra efa natambatra) dia miankina amin'ny lafin-javatra maro. Tsy mitovy ny mamorona kabary mandresy lahatra amin'ny alàlan'ny fantsona iray na amin'ny alàlan'ny mpamorona atiny na mpamorona maromaro.
Etsy ankilany, ny fitsaboana ny lahatenintsika dia zava-dehibe tokoa ary mazava ho azy fa ny psikolojia ao anatin'ilay dingana dia manana zavatra betsaka holazaina momba izany. Inona avy ireo zavatra tokony hotadidintsika rehefa mampiroborobo ny lahatenintsika mandresy lahatra sy maneho ny hevitsika amin'ny olon-kafa?
fiomanana: Ity no dingana voalohany, tsy maintsy miomana amin'ny famarotana isika (na hevitra, na vokatra). Tokony ho fantatsika amin'ny fotoana rehetra sy izay tena asehontsika ary nahoana. Inona no ho tanjontsika ary inona ny toetra mamaritra ny hevitsika. Ataovy ao an-tsaina fa mety mifanohitra aminao ny mpanelanelana aminao ary manontany ny sasany amin'ny tohan-kevitrao, noho izany dia tokony ho nomaninao ny vahaolana, fanazavana na valiny mety homenao ny mety ho fanontaniany.
fampahafantarana: Faharoa, tsy maintsy milaza mivantana sy mazava araka izay azo atao ny adihevitra sy ny antony manohana ny fanjohian-kevitra isika. Izao no fotoana tsy maintsy hiarovantsika hevitra. Mety hisy ny ady hevitra, lojika raha tokony hanolotra ny hevitrao ianao fa ilay olona iresahanao koa te-handray anjara amin'ilay resaka, izany no antony maha-zava-dehibe ny fiezahanao haminavina izay ho fisalasalany, ny mety ho fifamaliana izay mahatonga azy ireo tsy hatoky ny soso-kevitrao ary hisaintsaina izany mba hanazavana ny fisalasalana rehetra mety hitranga.
Manaraka: Izy io dia zavatra izay matetika tsy raharahina ary tsy misy ifandraisany amin'ny fanaterana izay efa namidy. Ny tena izy dia momba ny fandinihana ny antsipirihany sy ny toe-javatra nisy ny fivarotana na raha sendra misy hevitra iray, ny fijerena ireo hetsika efa napetraka. Amin'ny ankapobeny, rehefa misy olona voafitaky ny hevitra vao na nanaiky hividy vokatra iray dia mazàna izy ireo dia manao izany amin'ny fepetra sasany. Tokony ho azonao antoka fa feno ny fepetra notondroinao ary amin'ny fomba toy izany dia afa-po tanteraka ny mpanjifanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Miaro hevitra: toro-hevitra amin'ny fanomezana tetikasa amin'ny mpanjifanao